एमसीसी पाडो कि घाँडो ?
नेपालको ठूलो कम्युनिस्टलाई अहिले एमसीसी घाँडो भएको छ। त्यही हात्ती पार्टीका एकजना सांसद्ले चाहिँ त्यसलाई पाडो भनेछन्। नखाऊँ भने दिनभरिको शिकार खाऊँ भने कान्छोबाबूको अनुहारजस्तो भएको छ नेकपालाई। ठूलो कम्युनिस्टका
नेकपा केन्द्रीय समितिको बैठकमा तस्वीर र सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति स्वाभाविक छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू अगाडि कुर्सीमा बस्ने र पछाडि सुरक्षाकर्मी सतर्कताका साथ उभिने जुन चलन छ, त्यो धरहरालाई यस कारण मनपर्छ
कांग्रेस नेताको ‘मास्क’
नेता रामचन्द्र पौडेलको नाकमा मास्कले घाउ बनायो र उहाँ उपचारार्थ आकस्मिक कक्षमा भर्ना हुनुभयो। यो समाचार पढेर तपाईं हाँस्नु त भएन नि ’ हाँस्नु हुन्न है, खासगरी कोही बिरामी भएको
नेकपामा दुई पूर्व
पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी– कुल दुई पूर्व। एमाले र माओवादी केन्द्र नभनांै, नेकपा भनौं भन्यो, फेरि उही पूर्व। हिजो दिनभर धरहराअगाडि रहेको राष्ट्रिय सभागृह नामको घरमा यस्तै पूर्वेली देखिए।
पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेकाबाट जति पाठ सिके पनि धरहराले सिकी नभ्याउने भयो। सोमबार पार्टी कार्यालयमा नेविसंघका युवाहरुले एक–आपसमा मुक्कामुक्की गरेर र उनीहरुको दलका पाका नेताहरुले आ–आफ्ना युवालाई काखी च्यापेर जुन
अग्नि सापकोटा संघीय संसदको सभामुख भएकोमा भन्दा धरहरालाई उहाँ कुदेकोमा बढी प्रसन्नता छ। सभामुख मात्र होइन उच्च पद हासिल गरेपछि मानिसहरू ढलपलढलपल गर्दै हिंड्छन्, हिजोसम्म कुद्नेहरू यस्तो समयमा मन्द गतिले
सवारी भाडामा छुट लिने ? अन्तर्वार्ता दिनुस्
धरहरालाई थाहा छ, विद्यार्थी परिचयपत्र देखाएबापत उनीहरूले कुल भाडाको ४५ प्रतिशत छुट प्राप्त गर्छन्। आइतबार काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ रुटमा बस चलाउने सवारी चालकले १२ कक्षामा अध्ययनरत एक युवालाई सहचालकले प्रश्न गरे–
सभामुख पदका एक्लो उम्मेदवार भएसी अग्नी सापकोटा गद्गद् हुने नै भए। ठूलो रस्काकस्सीका वीच पार्टीले आफूलाई रोजेसी गद्गद् भएका उनी प्रतिपक्षी काँग्रेसले आफूविरुद्ध उम्मेदवार नदिएसी झनै गदगद भा’छन्। हरेक दिन
‘नानीदेखि लाग्या बानी कहाँ हट्थ्यो, औकात देखाइछोड्यो’ यो तर्कसँग नेपाली समाज अनविज्ञ छैन। राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे त अझ यो तर्कका पर्याय नै बन्या छन्। मनाङले माननीय बने तर
काठमाडौंमा अहिले धमाधम ‘ए’ डिभिजन लिग फुटबल प्रतिस्पर्धा चलिराख्या छ। सोमबारसम्म यो सिजनको ४९औं प्रतिस्पर्धा सकियो। तर, दशरथ रंगशाला र सातदोबाटोस्थित एन्फा मैदान भने हरेक दिन बेहुली अन्माएको घरझैं देखिन्छ।
उपयुक्त मुख बल्ल भेटिएको छ। मुख अर्थात सभामुख। नेकपा अध्यक्षद्वय ओली ‘प्रचण्ड’बीचको ‘महाभारत’ पछि उदाए अग्नि। ‘सबै माननीय महराझै छैनन्, सभामुख हाम्रै कोटाको हुनुपर्छ’ भन्ने पूर्वमाओवादीको अडानमा ओली लच्किएसी उदाए
‘मुटु नभएकाहरू’ भन्दै पीएम ओली सञ्चार माध्यमका सम्पादकमाथि आक्रोश पोख्या पोख्यै छन्। कुरो सही हो, राम्रा कुरा कहिल्यैै नदेख्ने, राम्रा र हाम्रा कुराको प्रशंसा नगर्ने पनि सम्पादक हुन्छन् र भन्या
माघ १, माघे संग्रान्ति। सबै नेपालीले विविध साँस्कृतिक र परम्परागत अभ्यासका साथ मनाउने साझा पर्व। नुवाकोटको तारुकामा भने बेग्लै ढंगले मनाइन्छ, गोरु जुधाएर। गोरु जुधेको/जुधाएको हेर्न वर्षेनी हजारौं व्यक्ति तारुका
लोकतन्त्र खुब फापेर होला मुलुकमा भ्याटमा छली शुत्र निकै मौलाएको छ। मुलुकभरका खेतबारी बाँझै भएर के भो त, शहर बजारमा कर छलीको खेती ह्वात्तै बढ्या छ। न कामदारको टेन्सन, न
प्रदेशका अच्छा खेलाडी
बल्लतल्ल प्रदेश ३ ले नाम र स्थायी राजधानी पाएको छ। पार्टीलाई चुनौती दिने नेकपाको असन्तुष्ट आवाजलाई जबरजस्त मुखौरो लगाएर काम कुरो फत्ते गरिएको छ। प्रदेशको स्वायत्त अधिकारलाई संघीय सरकारले झ्याप्पै
सभामुख रेल चढेर आउने ?
पूर्वएमाले र माओवादी मिल्या भन्या त के को हुनु, शक्तिशाली पार्टी बन्यो भनेर जनतालाई आँखामा छारो हान्न पो रैछ। नेताको मनै नमिलेसी पार्टी के को शक्तिशाली हुनु, शक्ति भा भए
‘विष पिउँ कि पार्टी छाडौ’–नेकपा नेता राजेन्द्र पाण्डे। ‘सरकार छोडेर आन्दोलन गरौझैं लाग्छ’–सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटा। हिउँदे झरीले अधिकांश भेगको जनजिवन प्रभावित भइरहँदा सत्तारुढ पार्टी नेकपाका चल्तीका नेताको पछिल्लो तर्कले मुलुकको
इतिहासकै शक्तिशाली सरकारको शक्ति कमजोर गराउने तत्व सलबलाएको ठहर गर्दै गत महिना पीएम ओलीले क्याविनेट गोडमेल गरे। करिव आधा दर्जन मन्त्रीलाई विदा गर्दै सोही हाराहारीमा नयाँ अनुहार थपे। थपिनेमा कोही
कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेजस्तै नेपालीले जहाँ गएएपनि जात्रा देखाउन छोड्न सकेनन्। प्रसंग हो नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०को अन्तर्राष्ट्रिय उद्घाटनको क्रममा अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा घटेको घटनालाई लिन सकिन्छ। सरकारको प्रतिनिधित्व
अनि फाप्दैन दुई
जाडो भगाउने अचुक उपायको खोजी कसैले गर्यो भने तत्काल जवाफ आउँछ–रुई, फुई र दुई जोड्नै पर्छ।’ रुई (सिरक), फुई (आगो) र दुई अर्थात् दम्पत्ति। कंक्रिटको सहरमा आगो ताप्न कहाँ पाउनु,